Gadzirisa Wiricheya Yako Kuti Ikubatsire | Karman® Mawiricheya
Chii chaungaite kugadzirisa yako wiricheya? Icho chiri rinorema kugadzirisa kana kungounza hunhu hwako? Gadzira chirevo. Yakananga kubva mukukuita kuti utenderere pamba pako kuenda pakufamba-famba mutown yako kana usingakwanise kufamba wega, iyo wiricheya iri chimwe chinhu chaunogona kuenda nacho chero kwaunofamba. Edza kuratidza zvishoma nezve iwe kuburikidza nazvo. Imwe epic nzira yekuratidza kugona kwako uye hunhu ndeyekugadzirisa yako wiricheya uye gadzira chirevo chakashinga neako ega ega flavour uye maitiro ehupenyu. Izvi zvinokubatsira iwe kuchengetedza yakawanda nguva yekutarisana nemhedzisiro inogona kuuya nekufamba kwenguva.
Zvakare, matambudziko epanyama senge mutsipa, musana, uye kurwadziwa musana zviri pakati pekukanganisa kwe kushandisa a wiricheya zvinokwana zvakakwana zvaunoda.
Nekudaro, nekuti iwo kukura uye kuumbwa kweiyo wiricheya inogona kukumanikidza kuisa imwe yekuedza kuti ifambe kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Izvi zvinowanzoitika kana muviri wako uri murefu kana uri mudiki pane saizi yeiyo wiricheya uri kushandisa.
Kupfuurirazve, hukuru hwakasiyana hwemikova uye zvivakwa zvakare zvinoda a wiricheya yakagadziriswa kuchengetedza daro rakachengeteka. Izvi ndizvo zvinhu zvikuru zvaunofanira kufunga nezvazvo kuva neyakagadziriswa dhizaini ye wiricheya izvo zvinoshanda zvakanaka kwauri uye zvinobatsira iwe kumhanyisa ako ezuva nezuva zviitwa nyore.
Mukuwedzera, a wiricheya tsika-yakagadzirwa nemabasa makuru inogona zvakare kubatsira mukugutsa zvaunoda zvemuviri.
Kutsvaga kwakaringana kwekuwedzera kwakanaka-zvinowedzera zvinogona kushongedza yako wiricheya nenzira yakasarudzika kuratidza hunhu hwako. Kubva pakuwedzera zvitambi kune akaturika e LED, macushion emaoko, uye dzimwe nzira dzinoverengeka pane yako wiricheya, iwe unogona kuwana kuti uzvigadzirire yako wiricheya yekuratidza hunhu hwako uye tarenda rakakura. Dzimwe dzenzira dzekugadzirisa wiricheya kuratidza tarenda rako rakataurwa pazasi:
Nzira dzekugadzirisa Chigaro che Wheel
Wedzera Tsika Makushoni
Kuratidza tsika wiricheya macushion ari nyore asi anopa nzira dzakawanda dzekuratidzira hunhu hwako uye kuratidza kugona kwako uye zvakafanana nguva kuvandudza kunyaradzwa kwemuviri wako wiricheya.
Yakasarudzika makushiti makavha anouya mune akawanda magadzirirwo, ayo anonyatso batsira kuwedzera chimwe chirevo kune dhizaini uye aesthetic yako wiricheya. Chinjanai akasiyana magadzirirwo ezuva nezuva sekuenderana nechishuwo chako chekupa yako wiricheya a itsva tarisai.
Iwe unogona zvakare kugadzira yako yega brand itsva mazano kushandisa jira raidiwa nezvinhu.
Zvakare, kana fekitori yako ikakwanira wiricheya pamutsago haaiti zvinopa kunyaradza kana kutsigira zvaunoda, unogona kufunga kuisa kumanikidza-kurerutsa makushini.
Izvi zvakagadzirirwa kuita yako wiricheya yakanyanya kugadzikana uye inobatsira kudzikisira kumanikidza uye kurwadziwa kubva kuzvinhu zvakaita semaronda kana kupwanya.
wiricheya pamutsago "class =" wp-mufananidzo-23854 "/>
gadzirisa wiricheya cushion
Itsva upholstery inzira yakasarudzika yekuzvigadzira pachako a wheelchair yakajairwa kuti iite seyako. Zvakare, kune vashoma vagadziri vanopa sarudzo yemafashoni upholstery. Izvi zvinogona kutengwa chaizvo kune yako wiricheya. Kana iwe unogona chete tora generic patters. Pamwe plad. Izvi zvinogara zvichizivikanwa.
Backrest inotsvedza, akavhara pamutsago, uye mhuru tambo inoongorora zvese zvinogona kutengwa zvakagadzirirwa kukwana zvaunoda. Unogona kuita backrest yako ifanane nehembe yako kana tux pazuva rako remuchato kana kuiputira mune chero ako aunofarira anodhindira. Zvimwe kunze kwekunyaradza, izvi upholstery uye inovhara kupa nyore yekuchenesa uye kugona kuwedzera kuzviratidza.
Shandisa Bumper Stickers ndiyo nzira huru yekugadzirisa yako wiricheya
Imwe nzira isingadhuri uye yakapusa yekumisikidza hunyanzvi hwekugadzirisa hunhu ndeweBumper Stickers. Mufananidzo unonakidza, chirevo chinoshamisira, kana chirevo chinokurudzira. Izvi zvimiti zvinobatsira kutanga iro basa rekushongedza yako wiricheya. Anonamira mabhatani inogona kuiswa kune ese mativi ako wiricheya kuita kuti zvionekwe nemunhu wese.
Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuyedza dhizaini akataura varindi sezvo isingangotarisike uye kunzwa kunakidzwa asi kunyangwe inopa iwe nedziviriro yemunwe yepamusoro paunenge uchifamba kuno neapo. Ratidza mufananidzo wechipfuwo chako chine rudo, sarudza rako rinogona kunge riri timu yemitambo, kana kuti shandura kune dzimwe nhambo.
Tarisa uone yedu LT-980 13lbs * wheelchair! Gadzirisa wiricheya yako
Nyowani Paint Coat inzira yakanaka yekugadzirisa yako wiricheya
Ita yako yekare dhiraivha mavhiri aite seatsva uye itsva zvakare nekuisa a jasi idzva yepende uye wedzera sarudzo yako yemavara kwavari. Muchokwadi, kupfeka nyowani nyowani kunouya nenzira dzakasiyana. Inova chidimbu chekugadzira. Izvi zvinogona kuendesa chigaro chako kuchitarisiko chitsva uye kukuita kuti utasve nemhando. Unogona kuwana Wiricheya ine mavara zvikamu zvekuwedzera theme yemavara kune yako nhema uye grey akara mavhiripu.
Pamusoro pezvo, mavhiri aNeon anowanikwawo mumusika, aunogona kushandisa zvinoenderana netema yako yaunoda.
Akatungamira Caster mavhiri
Kana iwe uchigara uchifamba husiku uye vanhu vachikuwana kwakaoma kukuona kana kukucherechedza murima, aya ma-light-up ma LED casters achave nechokwadi chekuti iwe unoonekwa kune vamwe vafambi uye chengetedza yakanyanya kuchengetedzeka kunyangwe munguva yekupedzisira nhema nhema.
Aya ma LED casters haadi mabhatiri uye anouya akasiyana mavara, achiaita iwo akakodzera nzira yekushongedza chero wiricheya. Edza kusanganisa uye kuenzanisa mavara emavhiri akasiyana kana iwe uchida kuita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza, asi ita chokwadi chekuwana saizi chaiyo uye inokodzera yako wiricheya.
Idzi ingori nzira diki diki dzekunakidzwa uye nehunyanzvi dzaunogona kuumburudza mune yako wega maitiro. Kune nzira dzisingaperi dzekuchinja kutaridzika kweako wiricheya kuita kuti kutasva kwako kuve kwakasununguka uye kwakanaka.
Aya ma LED casters haadi mabhatiri uye anouya akasiyana mavara, achiaita iwo akakodzera nzira yekushongedza chero wiricheya.
Uyezve, edza kusanganisa uye kuenzanisa mavara eakasiyana mavhiri kana iwe uchida kuita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza. Asi ita shuwa kuti uwane saizi chaiyo uye inokodzera yako wiricheya. Kana iwe uchida, isu tinogona nguva dzose kubatsira kugadzirisa yako wiricheya. Kune dzimwe nzira dzakaomarara dzatisinga svike pano. Zvakadai sekukwirira kwechigaro. Kuwedzera mota. Kana simba rinosimudza gumbo rinozorora.
Maitiro Ekugadzirisa Wiricheya
Dzimba Dzakasungwa Zviitiko zvevakuru
Zvinowanzoitika Matambudziko nemaWheelchair
Kugadzirisa Yako Wiricheya Zvishongedzo zveSitayera
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.